ရှက်ရှက်နဲ့ ဝန်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ် - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ရှက်ရှက်နဲ့ ဝန်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
Apann Pyay 11:40 PM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ရန်ကုန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ လေဆိပ်ရဲ့ဧည့်ခန်းမထဲမှာ မန္တလေးကိုသွားမယ့်လေယာဉ်ကို ကျွန်မ စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက နိုင်ငံခြားသားတွေ အများကြီးပဲ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်းကို ဆက်တဲ့ အများသုံးတယ်လီဖုန်း တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီ့တယ်လီဖုန်းက တယ်လီဖုန်းဆက်ခ မပေးရပါဘူး။ အဲ့ဒီ တယ်လီဖုန်းကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆက်နေတယ်။ သူ့နောက်မှာလည်း တယ်လီဖုန်း ဆက်ဖို့ စောင့်နေတဲ့သူ လေး ငါးယောက်လောက်ရှိတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း တယ်လီဖုန်းဆက်နေတာ ပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ မိနစ် ၂၀လောက်ကြာမှ နောက်တစ်ယောက်အလှည့် ရောက်တော့တယ်။ အဲ့ဒီ တစ်ယောက်ကလည်း ဖုန်းပြောလိုက်တာ အကြာကြီးပဲ။
ကျွန်မဘေးနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေပုံရတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ဖုန်းပြော နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီး “အားနာမှုမရှိလိုက်ကြတာ”လို့ ခံစားရတယ်။ဒီလိုနဲ့ မန္တလေးကို သွားမယ့်လေယာဉ် ရောက်လာပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ “စပီကာ”က ကြေညာပါတယ်။ မန္တလေးကို သွားမယ့်ခရီးသည်တွေ အားလုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားကြတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်ကို သွားဖို့ ဘတ်(စ်)ကားတစ်စီး ထိုးဆိုက်လာတယ်။ အဲ့ဒီကားနဲ့ လေယာဉ်ဆီကို လေယာဉ်စီးခရီးသည် တွေ သယ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ လူတွေဟာ ဘတ်(စ်)ကားပေါ်ကို အလုအယက်ပဲ တိုးဝှေ့တက်ကြတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေက အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ တိုးဝှေ့တက်တဲ့အထဲမှာ ကျွန်မလည်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လေယာဉ်ဆီကို ကျွန်မ ရောက်သွားတယ်။
လေယာဉ်ပျံရဲ့ နောက်အနားအပေါက်က ကျွန်မ တို့တက်ရတယ်။ ဒီလိုပါပဲ… လေယာဉ်ပေါ်ကို တိုးဝှေ့ပြီးတက်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ထိုင်ခုံနဲ့ ကိုယ်ဆိုပေမယ့် ဘာကြောင့်များ တိုးဝှေ့တက်ခဲ့မှန်း ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် မစဉ်းစားမိဘူး။ တိုးတာ၊ ဝှေ့တာ၊ တွန်းတာ၊ တိုက်တာ အကျင့်ပါနေလို့ပဲဖြစ်မယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်မဘးကထိုင်ခုံမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် လာထိုင်တယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့သူပါ။ သူဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပဲ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေတယ်။
လေယာဉ်တက်ပြီးလို့ (၁၀)မိနစ်လောက်အကြာမှာ လေယာဉ်မယ်လေးတွေက လက်တွန်းလှည်းလေးတွေကိုတွန်းပြီး အစား အသောက် လာကျွေးပါတယ်။ အပူလား။ အအေးလား။ ကြိုက်ရာသုံးဆောင်လို့ရတယ်။ ဖော့ဘူးလေးနဲ့ အသားညှပ် ပေါင်မုန့်တစ်လုံးစီ လိုက်ပြီးဝေတယ်။
ကျွန်မရဲ့ထိုင်ခုံက အတွင်းဘက်မှာပါ။ အစားအသောက်လာပြီးပေးတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးတွေက တစ်တန်းပြီးတစ်တန်း၊ တစ်ခုံပြီးတစ်ခုံ စနစ်တကျ ပေးဝေပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ခုံအနားလည်းရောက်ရော ကျွန်မက ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို လှမ်းယူလိုက်တယ်။
အသားညှပ်ဖော့ဘူးတစ်ဘူးကို လှမ်းယူလိုက် တယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားက လူသွားလမ်းရဲ့ဘေးမှာ နေရာယူထားသူ။ သူက အရင်ယူရမှာ။ ကျွန်မက အတွင်းဖက်ကခုံမှာ ထိုင်တဲ့သူ။ ကျွန်မက နောက်မှယူရမှာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက အရင် လက်ကိုလှမ်းလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသားက စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်။
အဲ့ဒီစကားကိုကြားကြားချင်း ကျွန်မနားမလည်ပါဘူး။ အစာစားရင်း ကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်။
ဒီတော့… “After you” ဆိုတာ “မင်းပြီးမှ”လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ “မင်းကို ဦးစားပေး”ပါတယ်။ “မင်းအရင်လုပ်”ပါ။ ဒီလို သဘောဆောင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပေါ် စကားတစ်ခုပါ။
ကျွန်မဟာ “After me” သမားပဲ။
ကျွန်မဟာ မီးရထားလက်မှတ်တန်းစီရင်လည်း ငါရဖို့…။
ဘတ်(စ်)ကားစီးရင်လည်း ငါအရင်တက်ဖို့၊ ငါ အရင်နေရာရဖို့။
ကားမောင်းရင်လည်း လမ်းဆုံမှာ ငါ အရင်ကူးဖို့၊ ငါ အရင်ဖြတ်ဖို့။
တွေးရင်း တွေးရင်နဲ့ ကျွန်မအရမ်းရှက်လာမိတယ်။
“After you” ဆိုတဲ့ စိတ်ဟာ လူကြီးလူကောင်းစိတ်ပဲ။ အိမ်မှာ ထမင်းဟင်းကို အမေကချက်တယ်။ အမေချက်ထားတဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းကို အမေ အရင်မစား ဘူး။ သားသမီးတွေကို အရင်ကျွေးတယ်။ “After you” ပေါ့ကွယ်။
ဒီလိုပဲ… မင်းအဖေဟာလည်း သူရှာလို့ရတဲ့ ငွေကြေးကို သူအရင်မသုံးဘူး။ သားသမီးတွေ ကို အရင်ပေးတယ်။ အရင်ကျွေးတယ်။ “After you” ပေါ့ကွယ်။ မင်းဟာလည်း မင်းညီတွေ၊ ညီမတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် “After you” လုပ်ရမှာပဲ။ ဒီလိုပဲ မင်းဟာ ဆရာတစ်ယောက်ဆိုတော့ တပည့်တွေနဲ့ တွေ့ရင် တပည့်တွေကို “After you” လုပ်ရမယ်။
“After you” ဆိုတာ ဦးစားပေးခြင်းသဘောအပြင် စာနာခြင်း၊ နားလည်ပေးခြင်းတွေ ပါနေတယ်။ မေတ္တာတရားတွေ ပါနေတယ်။ အတ္တနည်းခြင်းသဘောတွေ ပါဝင်နေတယ်။
“After me” ဆိုတာ အများအားဖြင့် လူငယ်တွေမှာ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ “After me” ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိနေတဲ့သူဟာ လူကြီး မဖြစ်သေးဘူး။ စိတ်အရွယ်မရောက်ခြင်းရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတဟာ “After me” ပဲ။ “အသက်တွေကြီးလေလေ တပ်မက်မှုတွေ နည်းလေလေ” ဖြစ်ရမှာ။ “အသက်တွေကြီးလေလေ တပ်မက်မှုတွေများလေလေ” ဆိုရင် ဒါဟာ တော်တော်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ “After me” ပဲ။ “After me” ဆိုတာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အတ္တတွေ ရင်ထဲမှာ အများကြီးရှိနေခြင်းကို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲ။
ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ “After me” သမားတွေနည်းလာပြီး “After you” သမားတွေများလာရင်တော့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းမှာပဲနော်။
အပြန်အလှန် “After you” ဆိုတဲ့….
Share လုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံကြီးသား ပီသအောင် တိုက်တွန်းနိုးဆော်ကြပါစို့
ရနျကုနျနိုငျငံတကာလဆေိပျမှာ တှကွေုံ့ခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြလေးပါ။ လဆေိပျရဲ့ဧညျ့ခနျးမထဲမှာ မန်တလေးကိုသှားမယျ့လယောဉျကို ကြှနျမ စောငျ့နခေဲ့တယျ။ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ နိုငျငံပေါငျးစုံက နိုငျငံခွားသားတှေ အမြားကွီးပဲ။ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ရနျကုနျမွို့တှငျးကို ဆကျတဲ့ အမြားသုံးတယျလီဖုနျး တဈခုရှိတယျ။ အဲဒီ့တယျလီဖုနျးက တယျလီဖုနျးဆကျခ မပေးရပါဘူး။ အဲ့ဒီ တယျလီဖုနျးကို ကောငျမလေးတဈယောကျဆကျနတေယျ။ သူ့နောကျမှာလညျး တယျလီဖုနျး ဆကျဖို့ စောငျ့နတေဲ့သူ လေး ငါးယောကျလောကျရှိတယျ။ ကောငျမလေးကလညျး တယျလီဖုနျးဆကျနတော ပွီးကိုမပွီးနိုငျဘူး။ မိနဈ ၂၀လောကျကွာမှ နောကျတဈယောကျအလှညျ့ ရောကျတော့တယျ။ အဲ့ဒီ တဈယောကျကလညျး ဖုနျးပွောလိုကျတာ အကွာကွီးပဲ။
ကြှနျမဘေးနားမှာ ထိုငျနတေဲ့ နိုငျငံခွားသားတဈယောကျက အဲ့ဒီအဖွဈအပကျြကို နားမလညျနိုငျအောငျ ဖွဈနပေုံရတယျ။ ကြှနျမစိတျထဲမှာ ဖုနျးပွော နတေဲ့လူတှကေိုကွညျ့ပွီး “အားနာမှုမရှိလိုကျကွတာ”လို့ ခံစားရတယျ။ဒီလိုနဲ့ မန်တလေးကို သှားမယျ့လယောဉျ ရောကျလာပါတယျ။ လယောဉျပျေါကိုတကျဖို့ “စပီကာ”က ကွညောပါတယျ။ မန်တလေးကို သှားမယျ့ခရီးသညျတှေ အားလုံး လှုပျလှုပျရှရှဖွဈသှားကွတယျ။
လယောဉျပျေါကို သှားဖို့ ဘတျ(ဈ)ကားတဈစီး ထိုးဆိုကျလာတယျ။ အဲ့ဒီကားနဲ့ လယောဉျဆီကို လယောဉျစီးခရီးသညျ တှေ သယျဆောငျမှာဖွဈတယျ။ လူတှဟော ဘတျ(ဈ)ကားပျေါကို အလုအယကျပဲ တိုးဝှတေ့ကျကွတယျ။ နိုငျငံခွားသားတှကေ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ တိုးဝှတေ့ကျတဲ့အထဲမှာ ကြှနျမလညျးပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ လယောဉျဆီကို ကြှနျမ ရောကျသှားတယျ။
လယောဉျပြံရဲ့ နောကျအနားအပေါကျက ကြှနျမ တို့တကျရတယျ။ ဒီလိုပါပဲ… လယောဉျပျေါကို တိုးဝှပွေီ့းတကျလိုကျတယျ။ ကိုယျ့ထိုငျခုံနဲ့ ကိုယျဆိုပမေယျ့ ဘာကွောငျ့မြား တိုးဝှတေ့ကျခဲ့မှနျး ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျ မစဉျးစားမိဘူး။ တိုးတာ၊ ဝှတေ့ာ၊ တှနျးတာ၊ တိုကျတာ အကငျြ့ပါနလေို့ပဲဖွဈမယျ။
ဖွဈခငျြတော့ ကြှနျမဘးကထိုငျခုံမှာ နိုငျငံခွားသားတဈယောကျ လာထိုငျတယျ။ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ တှခေဲ့တဲ့သူပါ။ သူဟာ အေးဆေးတညျငွိမျစှာပဲ စာအုပျတဈအုပျကို ဖတျနတေယျ။
လယောဉျတကျပွီးလို့ (၁၀)မိနဈလောကျအကွာမှာ လယောဉျမယျလေးတှကေ လကျတှနျးလှညျးလေးတှကေိုတှနျးပွီး အစား အသောကျ လာကြှေးပါတယျ။ အပူလား။ အအေးလား။ ကွိုကျရာသုံးဆောငျလို့ရတယျ။ ဖော့ဘူးလေးနဲ့ အသားညှပျ ပေါငျမုနျ့တဈလုံးစီ လိုကျပွီးဝတေယျ။
ကြှနျမရဲ့ထိုငျခုံက အတှငျးဘကျမှာပါ။ အစားအသောကျလာပွီးပေးတဲ့ လယောဉျမယျလေးတှကေ တဈတနျးပွီးတဈတနျး၊ တဈခုံပွီးတဈခုံ စနဈတကြ ပေးဝပေါတယျ။ ကြှနျမရဲ့ ခုံအနားလညျးရောကျရော ကြှနျမက ကျောဖီတဈခှကျကို လှမျးယူလိုကျတယျ။
အသားညှပျဖော့ဘူးတဈဘူးကို လှမျးယူလိုကျ တယျ။ တကယျတော့ အဲ့ဒီနိုငျငံခွားသားက လူသှားလမျးရဲ့ဘေးမှာ နရောယူထားသူ။ သူက အရငျယူရမှာ။ ကြှနျမက အတှငျးဖကျကခုံမှာ ထိုငျတဲ့သူ။ ကြှနျမက နောကျမှယူရမှာ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမက အရငျ လကျကိုလှမျးလိုကျတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ နိုငျငံခွားသားက စကားတဈခှနျးပွောတယျ။
အဲ့ဒီစကားကိုကွားကွားခငျြး ကြှနျမနားမလညျပါဘူး။ အစာစားရငျး ကြှနျမစဉျးစားမိတယျ။
After ဆိုတာ… ပွီးနောကျ။
you ဆိုတာ… သငျ၊ မငျး၊ နငျ၊ ရှငျ။
ဒီတော့… “After you” ဆိုတာ “မငျးပွီးမှ”လို့ အဓိပ်ပာယျရတယျ။ “မငျးကို ဦးစားပေး”ပါတယျ။ “မငျးအရငျလုပျ”ပါ။ ဒီလို သဘောဆောငျတဲ့ အင်ျဂလိပျခတျေပျေါ စကားတဈခုပါ။
ကြှနျမဟာ “After me” သမားပဲ။
ကြှနျမဟာ မီးရထားလကျမှတျတနျးစီရငျလညျး ငါရဖို့…။
ဘတျ(ဈ)ကားစီးရငျလညျး ငါအရငျတကျဖို့၊ ငါ အရငျနရောရဖို့။
ကားမောငျးရငျလညျး လမျးဆုံမှာ ငါ အရငျကူးဖို့၊ ငါ အရငျဖွတျဖို့။
လမျးကူးရငျလညျး ငါ အရငျ ဟိုဘကျရောကျဖို့…။
အလုပျလြှောကျရငျလညျး ငါ အလုပျအရငျရဖို့…။
ငါပွီးမှ မငျး…။ ငါအရငျ…။ ငါ့ကို ဦးစားပေး။
တှေးရငျး တှေးရငျနဲ့ ကြှနျမအရမျးရှကျလာမိတယျ။
ဒီအကွောငျးကို အိမျရောကျတော့ အဖနေဲ့အမကေို ပွောပွမိတယျ။ အမပွေောတဲ့စကားဟာ မှတျသားလောကျပါတယျ။
“After you” ဆိုတဲ့ စိတျဟာ လူကွီးလူကောငျးစိတျပဲ။ အိမျမှာ ထမငျးဟငျးကို အမကေခကျြတယျ။ အမခေကျြထားတဲ့ ထမငျး၊ ဟငျးကို အမေ အရငျမစား ဘူး။ သားသမီးတှကေို အရငျကြှေးတယျ။ “After you” ပေါ့ကှယျ။
ဒီလိုပဲ… မငျးအဖဟောလညျး သူရှာလို့ရတဲ့ ငှကွေေးကို သူအရငျမသုံးဘူး။ သားသမီးတှေ ကို အရငျပေးတယျ။ အရငျကြှေးတယျ။ “After you” ပေါ့ကှယျ။ မငျးဟာလညျး မငျးညီတှေ၊ ညီမတှနေဲ့ ပတျသကျရငျ “After you” လုပျရမှာပဲ။ ဒီလိုပဲ မငျးဟာ ဆရာတဈယောကျဆိုတော့ တပညျ့တှနေဲ့ တှရေ့ငျ တပညျ့တှကေို “After you” လုပျရမယျ။
“After you” ဆိုတာ ဦးစားပေးခွငျးသဘောအပွငျ စာနာခွငျး၊ နားလညျပေးခွငျးတှေ ပါနတေယျ။ မတ်ေတာတရားတှေ ပါနတေယျ။ အတ်တနညျးခွငျးသဘောတှေ ပါဝငျနတေယျ။
“After me” ဆိုတာ အမြားအားဖွငျ့ လူငယျတှမှော ဖွဈတတျကွတယျ။ ကလေးတှမှော ဖွဈတတျကွတယျ။ “After me” ဆိုတဲ့ စိတျရှိနတေဲ့သူဟာ လူကွီး မဖွဈသေးဘူး။ စိတျအရှယျမရောကျခွငျးရဲ့ အမှတျသင်ျကတေဟာ “After me” ပဲ။ “အသကျတှကွေီးလလေေ တပျမကျမှုတှေ နညျးလလေေ” ဖွဈရမှာ။ “အသကျတှကွေီးလလေေ တပျမကျမှုတှမြေားလလေေ” ဆိုရငျ ဒါဟာ တျောတျောရှကျစရာကောငျးတဲ့ “After me” ပဲ။ “After me” ဆိုတာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အတ်တတှေ ရငျထဲမှာ အမြားကွီးရှိနခွေငျးကို ဖျောပွလိုကျခွငျးပဲ။
“After me” သမားဟာ မိဘဆိုရငျလညျး မိဘ မပီသတဲ့သူပေါ့။ ဆရာဆိုရငျလညျး ဆရာမပီသတဲ့သူပေါ့။ သူငယျခငျြးဆိုရငျလညျး သူငယျခငျြး မပီသတဲ့သူပေါ့။ မိတျဆှဆေိုရငျလညျး မိတျဆှေ မပီသတဲ့သူပေါ့။ ဒါကွောငျ့ လူကွီးလူကောငျး ဖွဈခငျြရငျ “After me” ကိုလြှော့။ “After you” ဖွဈအောငျ ကွိုးစားပေါ့ သားရယျ။
ကြှနျမတို့ပတျဝနျးကငျြမှာ “After me” သမားတှနေညျးလာပွီး “After you” သမားတှမြေားလာရငျတော့ အရမျးပြျောစရာကောငျးမှာပဲနျော။
သူကလညျး ကိုယျ့အပျေါ “After you”။
ကိုယျကလညျး သူ့အပျေါ “After you”။
မိဘကလညျး သားသမီးအပျေါ “After you”
သားသမီးကလညျး မိဘအပျေါ “After you”
လူကွီးတှကေလညျး လူငယျတှအေပျေါ “After you”
လူငယျတှကေလညျး လူကွီးတှအေပျေါ “After you”
ဆရာကလညျး တပညျ့အပျေါ “After you”
တပညျ့ကလညျး ဆရာ့အပျေါ “After you”
အပွနျအလှနျ “After you” ဆိုတဲ့….
ဝနျးကငျြတဈခုကို ကြှနျမတို့ ထူထောငျကွရအောငျရှငျ….
Share လုပျခွငျးဖွငျ့ နိုငျငံကွီးသား ပီသအောငျ တိုကျတှနျးနိုးဆျောကွပါစို့